२०२२ सालको कर्मचारी वातावरण सर्वेक्षण – Office of the Provost – UW–Madison
२०२२ सालको कर्मचारी वातावरण सर्वेक्षण
एउटा समुदाय बनाउन प्रतिबद्ध छ जहाँ प्रत्येक व्यक्तिले सुरक्षित, मूल्यवान्, र सफलताको बाटो भएको महसुस गर्न सक्दछन् । हामीले बुझेका छौं कि कर्मचारीहरूले क्याम्पसको कामको वातावरण बेग्ला बेग्लै तरिकाले अनुभव गर्दछन् । २०२२ सालको कर्मचारी वातावरण सर्वेक्षण ले क्याम्पसलाई यी भिन्नताहरू बुझ्न, सबैभन्दा राम्रो व्यवहारहरू पहिचान गर्न र सुधार गर्न सहयोग गर्नेछ ।
तपाईंले सर्वेक्षण लिन आवश्यक छैन । त्यहीपनि हामीले जती धेरै उत्तरहरू पाउँछौं, त्यती राम्ररी समस्या र ढाँचाहरू देख्न सक्दछौं जसले राम्रो काम गरीरहेका र सच्च्याउन आवश्यक कुराहरूको सुझाव गर्दछन् । सर्वेक्षणमा तपाईंको कामको वातावरण, कामको युनिट, तपाईंको सुपरभाईजरसँगको सम्बन्ध, घरैबाट काम गर्न मिल्ने नीति र थप कुराहरूको प्रश्नहरू समावेश छन् । सर्वेक्षणको अन्त्यमा जनसांख्यिकीय प्रश्नहरूले डाटालाई राम्रोसँग बुझ्न र प्रवृत्तिहरू पहिचान गर्न सहयोग गर्न सन्दर्भ प्रदान गर्दछन । सर्वेक्षणका सबै प्रश्नहरू इच्छा भएमा उत्तर दिन सकिने खालका छन् ।
सुपरभाईजरहरूबाट कर्मचारीहरूलाई तलब पाउने अवस्थामा रहँदाको कामको समयमा सर्वेक्षण लिन अनुमति दिन अपेक्षा गरीएको छ । यस सर्वेक्षण पूरा गर्न लगभग १५ मिनेट जति लाग्नेछ ।
कर्मचारी वातावरण सर्वेक्षणलाई UW सर्वेक्षण केन्द्रले (UW Survey Center) प्रशासन गर्दैछ । यस सर्वेक्षण अप्रिल १२ देखि मे ३ सम्म उपलब्ध हुनेछ । सबै स्थायी शैक्षिक र युनिभर्सिटी कर्मचारीहरू, संकाय नियुक्ति नभएका सीमित कर्मचारीहरू र post-doc हरूले सर्वेक्षणमा भाग लिन सक्दछन् । The Women in Science & Engineering Leadership Institute ले संकाय सदस्यहरूका लागि छुट्टै सर्वेक्षणको प्रशासन गर्दैछ ।
यो सर्वेक्षण गोपनीय छ । सुपरभाईजर र अन्य क्याम्पस अगुवाहरूले कहिले पनि एक विशेष व्यक्तिसँग जोडिएको जवाफ देख्नेछैनन् ।
सर्वेक्षण परिणामहरूले सबैको महत्त्व हुने र सबैले योगदान गर्न सक्ने कार्यस्थल बनाउन निर्णय र नीतिहरूको मार्गदर्शन दिनेछ । हामी २०२२ सालको गर्मीमा नतिजाहरूको विश्लेषण गर्नेछौं र २०२२ सालको शरदमा परिणामहरू साझा गर्नेछौं । परिणामहरू सर्वेक्षणको गोपनीयतालाई कायम राखी साझा गरीनेछ ।
विश्वविद्यालयको रूपमा हाम्रो सफलता हाम्रो समुदायको प्रत्येक सदस्यको सफलतामा निर्भर गर्दछ । हामी तपाईंको प्रतिक्रियाको कदर गर्दछौं
वितरण र समापन
कम्प्युटर मार्फत वितरण: कम्प्युटर मार्फत वितरण: कम्प्युटरको सर्वेक्षण चिनियाँ, अङ्ग्रेजी, मङ, नेपाली, स्पैनिश र तिब्बती भाषामा उपलब्ध हुनेछ । सर्वेक्षणमा पुग्न तपाईंलाई इमेल मार्फत पठाइएको अद्वितीय लिङ्कमा थिच्नुपर्नेछ । तपाईंले आफ्नो कार्यस्थलामा वा क्याम्पसका InfoLab हरू मध्ये कुनै एकमा गएर सर्वेक्षण पूरा गर्न सक्नुहुन्छ । तपाईंले आफ्नो व्यक्तिगत मोबाईल फोन वा ट्याबलेटमा सर्वेक्षण लिन सक्नुहुन्छ ।
कागजी वितरण: सर्वेक्षणको कागजी संस्करण चिनियाँ, अङ्ग्रेजी, मङ, नेपाली, स्पैनिश र तिब्बती भाषाहरूमा पनि उपलब्ध हुनेछ । कागजी सर्वेक्षणहरू सबै कर्मचारीहरूका लागि उपलब्ध छन् जसले आफ्नो कामको लागि नियमित रूपमा कम्प्युटर चलाउँदैनन् वा कम्प्युटरमा सर्वेक्षण लिन सजिलो महसुस गर्दैनन् । अप्रिल २०, २१, २६ र २७ का सहायता बैठकहरूमा कागजी प्रतिलिपिहरू वितरण गरिनेछ । (कृपया कार्यक्रम स्थान र समयहरूको लागि तलको “थप समर्थन” खण्ड हेर्नुहोला) । बैठकहरू अङ्ग्रेजी, स्पैनिश, मङ, तिब्बती, चिनियाँ र नेपाली भाषाहरूमा प्रदान गरीनेछ । सांस्कृतिक भाषागत सेवाले (Cultural Linguistic Services) व्यक्तिगत बैठकहरूमा भाषा सहायता र सुविधा प्रदान गर्नेछ । बैठकहरू दिन र रातको कामको समयमा प्रदान गरीनेछ ।
यदि तपाईं बैठकहरू मध्ये कुनै एकमा उपस्थित हुन सक्नुहुँदैन भने, तपाईंले फोन वा इमेल मार्फत कागजी प्रतिलिपि अनुरोध गर्न सक्नुहुन्छ । तपाईंको अनुरोध पाएपछि, क्याम्पसले तपाईंको सर्वेक्षण फिर्ता गर्न निर्देशनहरू सहित तपाईंको घरको ठेगानामा कागजी सर्वेक्षण पठाउनेछ ।
अङ्ग्रेजी / ENGLISH: (608) 265-2257
स्पैनिश / SPANISH: (608) 265-0838
मङ / HMONG: (608) 263-2217
तिब्बती / TIBETAN: (608) 890-2545
चिनियाँ / CHINESE: (608) 890-2628
कर्मचारीहरूलाई कागजी सर्वेक्षण पूरा गर्ने समय र ठाउँ प्रदान गर्न व्यक्तिगत बैठकहरू हुनेछन् । अङ्ग्रेजी, स्पैनिश, मङ, तिब्बती, चिनियाँ र नेपाली भाषाहरूमामा बैठकहरू सञ्चालन गरीनेछ । सांस्कृतिक भाषागत सेवाले(Cultural Linguistic Services) भाषा सहायता र सुविधा प्रदान गर्नेछ । बैठकहरू दिनको र रातीको कामको समयमा आयोजना गरीनेछ । पहिले नै दर्ता गर्न आवश्यक छैन ।
बिहान 9:00 – 10:30 बजे
बिहान 8:45 बजे चेक ईन शुरू हुनेछ
यदि ठाउँ भएमा सार्वजनिक शुल्क लाग्ने पार्किङ्ग
Lake & Johnson (lot 46) र Fluno Center Garage (lot 83)
मा उपलब्ध हुनेछन् । कार्यक्रममा पार्किङ्गको लागि शुल्क तिर्ने कार्ड दिईनेछ ।
बेलुकी 8:00 – 9:30 बजे
बेलुकी 7:45 बजे चेक ईन शुरू हुनेछ
यदि ठाउँ भएमा सार्वजनिक शुल्क लाग्ने पार्किङ्ग Lake & Johnson (lot 46) र Fluno Center Garage (lot 83) मा उपलब्ध हुनेछन् । कार्यक्रममा पार्किङ्गको लागि शुल्क तिर्ने कार्ड दिईनेछ ।
बेलुका 7:00 बजेबाट राती 1:00 बजेसम्म कार्यक्रम पार्किङ्गको लागि Lot 91 खोलीनेछ ।
Lot 61, 94 Gordon बाट ५-६ मिनेटको पैदल दूरीमा छन् र बेलुकी 4:30 बजेदेखि बिहान 7:00 बजेसम्म पार्किङ्गको लागि उपलब्ध छन् ।
राती 11:00 – 12:30 बजे
राती 10:45 बजे चेक ईन शुरू हुनेछ
बेलुकी 8:00 – 9:30 p.m. बजे
यदि ठाउँ भएमा सार्वजनिक शुल्क लाग्ने पार्किङ्ग UW Hospital Ramp (lot 75) मा उपलब्ध हुनेछन् । कार्यक्रममा पार्किङ्गको लागि शुल्क तिर्ने कार्ड दिईनेछ ।
बेलुका 7:00 बजेबाट राती 1:00 बजेसम्म कार्यक्रम पार्किङ्गको लागि Lot 74 खोलीनेछ ।
Lot 82, 60, 64 HSLC बाट ५-६ मिनेटको पैदल दूरीमा छन् र बेलुकी 4:30 बजेदेखि बिहान 7:00 बजेसम्म पार्किङ्गको लागि उपलब्ध छन् ।
दिउँसो 2:00 – 3:30 बजे
दिउँसो 1:45 बजे चेक ईन शुरू हुनेछ
सहायता बैठकहरूका लागि सार्वजनिक यातायात पनि उपलब्ध छ ।
Route 80 बस – बिहान लगभग 6:00 बजे देखिबाट राती लगभग 12:00 बजेसम्म चल्छ, Gordon Commons र HSLC को ठ्याक्कै छेउमा बस स्टप छन्
Route 82 बस – बेलुकी लगभग 7:00 बजे देखिबाट राती लगभग 2:00 बजेसम्म चल्छ, WARF Building को ठ्याक्कै छेउमा बस स्टप छ । Gordon Commons को छेउमा बस स्टप छ जुन HSLC बाट ६ मिनेटको हिँड्ने दूरीमा (0.3 miles) छ
लगातार सोधिने प्रश्न/जिज्ञासाहरू
पृष्ठभूमि सहभागिता सर्वेक्षण पहुँच अगाडि हेर्ने क्रममा
लगातार सोधिने प्रश्न/जिज्ञासाहरूः पृष्ठभूमि
यो सर्वेक्षणको उद्देश्य के हो ?
कर्मचारी वातावरण सर्वेक्षणले क्याम्पसका अगुवाहरूलाई UW–Madison मा काम गर्ने विभिन्न पृष्ठभूमि र पहिचान भएका व्यक्तिहरूको अनुभव सहित क्याम्पसको वातावरण बारे धारणाहरू बुझ्न सहयोग गर्नेछ । सर्वेक्षणको नतिजाले हामीले के राम्रो गरिरहेका छौं र हामी कहाँ सुधार्न सक्दछौं भनेर देखाउनेछ ।
सर्वेक्षणले क्याम्पसमा प्रशासित धेरै कर्मचारी वातावरण सर्वेक्षणहरूलाई एउटै सर्वेक्षणमा एकजुट गर्दछ । यसले स्कूल, कलेज र विभागहरूको प्रशासनिक भार कम गर्दछ । एउटा सर्वेक्षणको अर्थ हामीले विश्वविद्यालय भरीको डाटाको तुलना गर्न सक्दछौं ।
यस सर्वेक्षणको सन्दर्भमा वातावरणको अर्थ के हो ?
कर्मचारी सर्वेक्षणको लागि, “वातावरणले” तपाईंको कामको युनिट, सुपरभाईजरसँगको सम्बन्ध, आदि, सहित तपाईंको कामको वातावरणको प्राय सबै कुराहरू बुझाउँदछ ।
यो सर्वेक्षण कसले बनाएको हो ?
२०२२ सालको कर्मचारी वातावरण सर्वेक्षण प्रोभोस्टको कार्यालय र अर्थ र प्रशासनका उपकुलपतिको कार्यालयको साझेदारीमा भएको हो । सर्वेक्षणका प्रश्नहरू क्याम्पस भरका प्रतिनिधिहरूको कार्य समूहद्वारा विकसित गरिएको थियो जसमा प्रोभोस्टको कार्यालय, अर्थ र प्रशासनका उपकुलपतिको कार्यालय, विविधताको विभाग, समन्याय र शैक्षिक उपलब्धि, मानव संसाधन कार्यालय, UWसर्वेक्षण केन्द्र, र विज्ञान र ईन्जिनियरिङ्ग नेतृत्वमा महिलाको संस्थान समावेश छन् ।
UW सर्वेक्षण केन्द्र के हो ?
The University of Wisconsin Survey Center (UWSC) एउटा प्रमुख, शैक्षिक सर्वेक्षण अनुसन्धान संस्था हो । सन् १९८७ मा स्थापना पछि UWSC ले सर्वेक्षण अनुसन्धानको क्षेत्रमा काम गर्दै हजारौं अध्ययनहरू सञ्चालन गरेको छ । UWSC लाई क्याम्पस-व्यापी र युनिट-स्तर वातावारण सर्वेक्षणहरू, ठूला संघीय कोष प्राप्त सर्वेक्षण परियोजनाहरू, र विभाग र कलेज सर्वेक्षणहरू समावेश गर्ने सर्वेक्षणहरूका अत्यन्त संवेदनशील डाटा जिम्मा दिइएको छ ।
UWSC ले गोपनीयता कायम राख्ने आफ्नो प्रतिष्ठाको दावी गर्दछ । UWSC ले आफ्नो UW प्रशासन साझेदारहरूसँग पहिचानकर्ताहरू साझा गर्दैन । थप रूपमा, सबै UWSC कर्मचारीहरूले UWSC बाट कुनै गोप्य डाटा जारी गरीने छैन भनी गोपनीयताको सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका छन् । UW सर्वेक्षण केन्द्रका नीतिहरू र गोपनीयता सम्बन्धी मापदण्डहरू आफ्नो वेबसाईटमा उपलब्ध छन् ।
के मैले भर्खरै क्याम्पस सेवाहरूको बारेमा मेरो अनुभवहरूको बारेमा सर्वेक्षण पूरा गरेको थिईँन ?
प्रोभोस्ट र अर्थ र प्रशासनका उपकुलपतिले हालसालै प्रशासनिक गुणस्तर सन्तुष्टि सर्वेक्षण (AQSS) सञ्चालन गरेका थिए । AQSS सर्वेक्षण पछिल्लो फेब्रुअरीमा बन्द भयो । यो एउटा छुट्टै सर्वेक्षण थियो जसले सहभागीहरूलाई प्रशासनिक सेवाहरूको आठ श्रेणीहरूमा आफ्नो अनुभवलाई झल्काउन आग्रह गरेको थियो । २०२२ सालको कर्मचारी वातावरण सर्वेक्षणमा तपाईंको कार्यस्थलको वातावरण, कार्य युनिट, तपाईंको सुपरभाईजरसँगको सम्बन्ध, आदि बारे प्रश्नहरू समावेश छन् । AQSS मा तपाईंको सहभागिता भएतापनि, कृपया २०२२ सालको कर्मचारी वातावरण सर्वेक्षण पूरा गर्नुहोस् जसले विश्वविद्यालय अगुवाहरूलाई विभिन्न पृष्ठभूमि, पहिचान र पेशाका व्यक्तिहरूले UW–Madison मा रोजगारीको अनुभव कसरी गर्दछन् भन्ने बुझ्न सहयोग गर्दछ ।
संलग्नता, समावेशीकरण र विविधताको (EID) सर्वेक्षणको के भयो ?
कर्मचारी वातावरण सर्वेक्षण २०२२ सालमा EID सर्वेक्षणको सट्टा शुरू गरिएको छ । पहिलेको EID सर्वेक्षण लिएका कर्मचारीहरूले कर्मचारी वातावरण सर्वेक्षणमा धेरै उही प्रश्नहरू देख्नेछन् । उही (वा उस्तै) प्रश्नहरू चलाउँदा अर्थ र प्रशासनका युनिटहरूलाई समयसँगै बदलहरू हेरविचार गर्न र प्रगति नाप्न अनुमति मिल्दछ । यस वर्ष EID सर्वेक्षण लिने अपेक्षा गरेका कर्मचारीहरूले कर्मचारी वातावरण सर्वेक्षण पूरा गर्नुपर्दछ ।
अर्थ र प्रशासनका उपकुलपतिको कार्यालयले सन् २०१२ सालमा EID सर्वेक्षण शुरू गरेको थियो । रिपोर्ट गर्ने युनिटहरूमा कार्यरत कर्मचारीहरूले सन् २०२० सम्म प्रत्येक वर्ष सर्वेक्षण लिने अवसर पाएका थिए । अर्थ र प्रशासनका उपकुलपति र प्रशासन EID सिद्धान्तहरू प्रति र सबै कर्मचारीहरूका काम गर्दाको अनुभव सुधार्न प्रतिबद्ध छन् ।
तपाईंले मेरो पहिचानको बारेमा जनसांख्यिकीय र अन्य प्रश्नहरू किन सोध्नुभएको छ ?
सर्वेक्षणको अन्त्यमा जनसांख्यिकीय प्रश्नहरूले डाटालाई राम्रोसँग बुझ्न र प्रवृत्तिहरू पहिचान गर्न सहयोग गर्न सन्दर्भ प्रदान गर्दछन । सर्वेक्षणका सबै प्रश्नहरू इच्छा भएमा उत्तर दिन सकिने खालका छन् ।
लगातार सोधिने प्रश्न/जिज्ञासाहरूः सहभागिता
के यो सर्वेक्षण गोपनीय छ ?
छन् । हामी तपाईंलाई पहिचान गर्न सक्ने उत्तरहरू साझा गर्नेछैनौं । UW सर्वेक्षण केन्द्रले सर्वेक्षणको प्रशासन गर्दैछ र तपाईंले कम्प्युटर वा कागजी सर्वेक्षण पूरा गर्ने क्रममा गोपनीयता कायम राख्ने विधिहरू चलाउँदैछ । तपाईंको सुपरभाईजर र अन्य क्याम्पस अगुवाहरूले तपाईंको उत्तरहरूमा तपाईंको नाम कहिल्यै देख्नेछैनन् । तपाईंका प्रतिक्रियाहरू अन्य कर्मचारीहरूसँगका प्रतिक्रियाहरूसँग मिसाइने छन् ताकि तपाईंको पहिचान गर्न सकिँदैन । १० भन्दा कम प्रतिक्रियाहरू भएका युनिटहरूबाट सर्वेक्षणका नतिजाहरूलाई तपाईंको पहिचानको सुरक्षा गर्न अर्को उच्च संगठनात्मक स्तरमा समावेश गरिनेछ । तपाईंको पहिचान खुलाउन सक्ने लिखित प्रतिक्रियाहरू साझेदारी गरीनेछैन ।
सर्वेक्षण कसले पूरा गर्न सक्दछन् ?
लगभग १६,८०० स्थायी शैक्षिक र युनिभर्सिटी कर्मचारीहरू, संकाय नियुक्ति नभएका सीमित कर्मचारीहरू र post-doc हरूले सर्वेक्षणमा भाग लिन सक्दछन् ।
सर्वेक्षण पूरा गर्न कति समय लाग्नेछ ?
लगभग १५ मिनेट । यदि तपाईंले एकै पटकमा सर्वेक्षण पूरा गर्न सक्नुभएन भने, तपाईंले कुनैपनि बेलामा रोकेर अरू कुनै बेलामा सर्वेक्षणमा जहाँसम्म पुग्नुभएको थियो त्यहीँबात फेरि शुरू गरेर पूरा गर्न सक्नुहुन्छ ।
के मैले सर्वेक्षण पूरा गर्न आवश्यक छ ?
छैन । तपाईंले सर्वेक्षण पूरा गर्न आवश्यक छैन । त्यहीपनि, हामी आशा गर्दछौँ कि तपाईंले पूरा गर्नुहुन्छ! यो सर्वेक्षणले तपाईंको कामको अनुभवको बारेमा विवरण बाँड्ने अवसर हो । सहभागिता दरहरू उच्च हुँदा सर्वेक्षणहरूले राम्रो काम गर्दछ । हाम्रो कार्यस्थलमा भएका सुधारहरूको बारेमा राम्रो निर्णयहरू बनाउन सहयोग गर्नको लागि हामी तपाईंको प्रतिक्रियाको कदर गर्दछौं ।
थप जानकारीको लागि मैले कोसँग कुरा गर्न सक्दछु ?
सर्वेक्षण बारे प्राविधिक प्रश्नहरूको लागि, कृपया UW सर्वेक्षण केन्द्र परियोजना निर्देशक Nadia Assad लाई assad@wisc.edu मा ईमेल पठाउनुहोला ।
सर्वेक्षण बारे सामान्य जानकारीको लागि — यसको लक्ष्यहरू र ज्ञान कसरी प्रयोग गरीनेछ — कृपया staffclimatesurvey@wisc.edu मा सर्वेक्षण योजना टोलीलाई ईमेल पठाउनुहोला।
सर्वेक्षण पूरा गर्न मैले कसरी सहयोग पाउन सक्दछु ?
कर्मचारीहरूलाई कागजी सर्वेक्षण पूरा गर्ने समय र ठाउँ प्रदान गर्न व्यक्तिगत बैठकहरू हुनेछन् । अङ्ग्रेजी, स्पैनिश, मङ, तिब्बती, चिनियाँ र नेपाली भाषाहरूमामा बैठकहरू सञ्चालन गरीनेछ । सांस्कृतिक भाषागत सेवाले (Cultural Linguistic Services) भाषा सहायता र सुविधा प्रदान गर्नेछ । बैठकहरू दिनको र रातीको कामको समयमा आयोजना गरीनेछ । पहिले नै दर्ता गर्न आवश्यक छैन ।
म क्याम्पसमा एउटा विद्यार्थी कर्मचारी हुँ । किन मैले सर्वेक्षणमा भाग लिन सक्दिँन ?
विद्यार्थीहरूलाई २०२१ सालको शरद सेमेस्टरमा विद्यार्थी क्याम्पस वातावरण सर्वेक्षणमा (Student Campus Climate Survey) भाग लिन आमन्त्रित गरीएको थियो । १३,००० भन्दा बढी विद्यार्थीहरूले क्याम्पसको बारेमा आफ्ना विचार, अनुभव र चिन्ताहरू साझा गरे । नतिजाहरू, मुख्य निष्कर्षहरू र सिफारिशहरू कहिले साझा गरिनेछन् भन्ने कुराहरू सहित विद्यार्थी सर्वेक्षणको बारेमा थप जानकारी पाउनुहोस् ।
म UW–Madison संकायको सदस्य हुँ । मैले मेरो अनुभव कसरी साझा गर्न सक्दछु ?
Study of Faculty Worklife संकायको लागि कामको वातावरण सर्वेक्षण हो । अध्ययनको सातौं लहर अहिले क्षेत्रमा छ । तपाईंले आफ्नो घरमा पठाइएको कागजी सर्वेक्षण पाउनुभएको हुनुपर्दछ । थप जानकारी वा संकाय सर्वेक्षणको सहयोगको लागि कृपया Jennifer Sheridan लाई सम्पर्क गर्नुहोला ।
लगातार सोधिने प्रश्न/जिज्ञासाहरूः सर्वेक्षणमा पहुँच
मैले २०२२ सालको कर्मचारी वातावरण सर्वेक्षण कसरी पाउन सक्दछु ?
यो सर्वेक्षण कम्प्युटर मार्फत र कागजी फाराममा उपलब्ध हुनेछ । UW सर्वेक्षण केन्द्रले सबै योग्य कर्मचारीहरूका लागि अप्रिल १२ मा एउटा लिङ्क भएको ईमेल पठाउनेछ । कागजी सर्वेक्षणहरू सबै कर्मचारीहरूका लागि उपलब्ध छन् जसले आफ्नो कामको लागि नियमित रूपमा कम्प्युटर चलाउँदैनन् वा कम्प्युटरमा सर्वेक्षण लिन सजिलो महसुस गर्दैनन् । सर्वेक्षणका दुबै संस्करणहरू अङ्ग्रेजी, स्पैनिश, मङ, तिब्बती, चिनियाँ र नेपाली भाषाहरूमामा उपलब्ध हुनेछन् ।
के मैले कागजी सर्वेक्षण पूरा गर्न सक्दछु ?
कर्मचारीहरूले अप्रिल २०, २१, २६ र २७ का व्यक्तिगत रूपका सहायता बैठकहरूमा कागजी सर्वेक्षण पूरा गर्न सक्नेछन् । बैठकहरूमा कागजी प्रतिलिपिहरू वितरण गरिनेछ । (कृपया कार्यक्रम स्थान र समयहरूको लागि तलको “थप समर्थन” खण्ड हेर्नुहोला) । बैठकहरू अङ्ग्रेजी, स्पैनिश, मङ, तिब्बती, चिनियाँ र नेपाली भाषाहरूमा प्रदान गरीनेछ । सांस्कृतिक भाषागत सेवाले व्यक्तिगत बैठकहरूमा भाषा सहायता र सुविधा प्रदान गर्नेछ । बैठकहरू दिन र रातको कामको समयमा प्रदान गरीनेछ । पहिले नै दर्ता गर्न आवश्यक छैन । व्यक्तिगत रूपका बैठकहरूले कर्मचारीहरूलाई कागजी सर्वेक्षण पूरा गर्ने ठाउँ र समय प्रदान गर्दछ ।
कम्प्युटरमा नियमित पहुँच भएका कर्मचारीहरूलाई सो रूपमा सर्वेक्षण पूरा गर्न हामी प्रोत्साहन गर्दछौं ताकि हामी तपाईंको प्रतिक्रियाहरू सजिलै सङ्कलन गर्न र हाम्रा निष्कर्षहरू छिटो साझा गर्न सकौं ।
के मैले कामको समयमा सर्वेक्षण पूरा गर्न सक्दछु ?
सक्नुहुन्छ । सुपरभाईजरहरू लचिलो हुने अपेक्षा गरीन्छ र कर्मचारीहरूलाई कामको घण्टा र तलब स्थितिमा सर्वेक्षण गर्न अनुमति दिन्छ । यसमा क्याम्पसको Infolab जान र त्यहाँबाट आउन लाग्ने समयको र व्यक्तिगत सहयोग सभामा जान दिने अनुमति पनि समावेश छ ।
के सर्वेक्षण बेग्ला बेग्लै भाषाहरूमा उपलब्ध हुनेछ ?
हुनेछ । सर्वेक्षणका दुबै संस्करणहरू अङ्ग्रेजी, स्पैनिश, मङ, तिब्बती, चिनियाँ र नेपाली भाषाहरूमामा उपलब्ध हुनेछन् ।
यदि म सहायता बैठकमा उपस्थित हुन सकिँन भने मैले कागजी सर्वेक्षणको प्रतिलिपि कसरी पाउन सक्दछु ?
सर्वेक्षणलाई कम्प्युटरबाट पूरा गर्न मैले कुन लिङ्क चलाउनु पर्दछ ?
तपाईंले सर्वेक्षण पूरा गर्न UW सर्वेक्षण केन्द्रले उपलब्ध गराएको लिङ्क चलाउनुपर्दछ । तपाईंले मङ्गलबार, अप्रिल १२ मा तपाईंको क्याम्पस इमेलमा सर्वेक्षणको (लिङ्क सहित) निमन्त्रणा पाउनुहुनेछ वा पाउनुपर्दछ । तपाईंले ईमेलमा “Staff Climate Survey” खोजेर यो फेला पार्न सक्नुहुन्छ ।
मैले मेरो कागजी सर्वेक्षण कसरी फिर्ता गर्न सक्दछु ?
यदि तपाईंले कागजी सर्वेक्षणको प्रतिलिपि आफ्नो घरको ठेगानामा पठाउन अनुरोध गर्नुभयो भने,यसमा एक ठेगाना राखीसकेको फिर्ता पठाउन मिल्ने खाम समावेश हुनेछ जुन तपाईंले कुनै पनि United States Postal Service मार्फत पठाउन सक्नुहुन्छ । कर्मचारीहरूले सहायता बैठकहरूमा कागजी सर्वेक्षण पूरा गरेर बुझाउन सक्दछन् । यदि तपाईं क्याम्पसले तपाईंको सर्वेक्षण फिर्ता गर्न निर्देशनहरू सहित तपाईंको घरको ठेगानामा कागजी सर्वेक्षण पठाउनेछ ।
यदि तपाईंले सहायता बैठकहरूमा तपाईंको सर्वेक्षण पूरा गर्न सक्नुभएन वा ठेगाना राखीएको खाम हराउनुभयो भने भने, तपाईंले आफ्नो पूरा गर्नुभएको कागजी सर्वेक्षण क्याम्पसमा रहेको आठवटा drop box हरू मध्ये कुनै एकमा फिर्ता गर्न सक्नुहुन्छ । Dropbox हरू यहाँ अवस्थित छन्:
लगातार सोधिने प्रश्न/जिज्ञासाहरूः अगाडि हेर्ने क्रममा
हामी २०२२ सालको गर्मीमा नतिजाहरूको विश्लेषण गर्नेछौं र २०२२ सालको शरदमा परिणामहरू साझा गर्नेछौं ।
के यो सर्वेक्षण फेरि प्रदान गरीनेछ ?
हामी हरेक दुई वा तीन वर्ष कर्मचारी वातावरण सर्वेक्षण प्रदान गर्ने योजना बनाउँदैछौं । अर्को सर्वेक्षण उपलब्ध हुनु अघि तपाईंलाई सञ्चार पठाईनेछ ।
थप प्रश्न वा जिज्ञासाहरू
सर्वेक्षण बारे सामान्य जानकारीको लागि — यसको लक्ष्यहरू र ज्ञान कसरी प्रयोग गरीनेछ — कृपया staffclimatesurvey@wisc.edu मा सर्वेक्षण योजना टोलीलाई ईमेल पठाउनुहोला ।